Rasmi: filimka Padmaavat iyo mudo labo todobaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay – Filimside.net
Rasmi: filimka Padmaavat iyo mudo labo todobaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
Taariikhda: February 9, 2018
Padmaavat ayaa sameeyay ganacsi aad u baaxad weyn wuxuuna keenay 64.75 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa labaad wuxuuna noqday filimka lixaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyo todobaadkiisa labaad.
Wadarta guud filimka Padmaavat haatan wuxuu marayaa 224.75 Crore (Trade Figure) sidoo kalena waxaa lagu kalsoon yahay in todobaadkiisa sedexaad uu ganacsi wacan sameyn doono waloow filimka Padman uu loolan kala kulmi doono hadana Padmaavat shaqadiisa labo todobaad ayuu ku qabsaday.
Waxaa cajiib ah in filimka Padmaavat mudo labo tobobaad uu dhul weynaha Telugu Nizam / Andhra ka keenay 20 Crore wuxuuna dhaafi doonaa rikoorka Dangal oo halkaas 21 Crore cimri ahaantiisa kasoo xareeyay!
Sidoo kale Mumbai ganacsi adag ayuu ka sameenayaa ayadoon Gujarat laga daawaneyn wuxuuna cimri ahaantiisa ku ganacsi noqon doonaa filimada waa weyn sida Sultan ama Bajrangi Bhaijaan ganacsiga ay ka sameeyeen Mumbai iyo hareeraheeda waa guul kale oo aad u weyn filimka Padmaavat gaari doono.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Padmaavat mudo labo todobaad ganacsiga uu sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Todobaadka kowaad 159.47 Crore (Rasmi)
Jimco labaad – 9.50 Crore
Sabti labaad – 15.50 Crore
Axad labaad – 18.50 Crore
Talaado labaad – 5.75 Crore
Arbaco labaad – 5.25 Crore
Khamiis labaad – 4.75 Crore
Wadarta Guud – 224.22 Crore (Trade Figure) (Qiyaas)